Olee otú Ihichapu Data on iPad
Mgbe ị chọọ 'ihichapu data on iPad', i nwere ike na-ngwọta si N'ihi na peeji: pịa Ntọala ngwa si Home ihuenyo> enweta General> pịgharịa gaa na ala na ihuenyo na enweta Tọgharia> mgbata Ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala> n'ịkwado nhichapụ. Otú ọ dị, m ga-agwa unu eziokwu na data ehichapụ na iPad na otú a nwere ike-natara site na ụfọdụ mgbake software. Nke ahụ bụ na-ekwu otú a bụ bụghị n'ụzọ zuru ezu ihichapu data on iPad. Ma ọ bụrụ na ị na-agbalị otú a, ụfọdụ data na ị chọrọ ịnọgide ga-ehichapụ.
Ebe a na isiokwu a, m chọrọ ikwu na ị na a mma ngwá ọrụ iji na ntukwasi-obi ehichapụkwa iPad. Nke ahụ na-eji Wondershare SafeErase, a ngwá ọrụ na-eji agha ọkọlọtọ technology ibibi data. Na site na iji ya, ị nwere ike họrọ data na gị iPad ihichapu. Ọ na-enye gị 4 nhọrọ ihichapu data on iPad.
1-Pịa nzacha na mkpocha: a nhọrọ-enye gị ohere ka ihichapụ log faịlụ, foto / videos cache faịlụ, iTunes syncing cache faịlụ, download temp faịlụ, ngwa site junk faịlụ.
Ihichapu Private Data: a nhọrọ-enyere gị aka ehichapụ data, Safari cache, Safari akụkọ ihe mere eme, Safari Kuki, Keyboard cache, ozi Mgbakwụnye, ozi, na-akpọ akụkọ ihe mere eme, ndetu na photos.
Ihichapu ehichapụ faịlụ: Ụfọdụ ehichapụ faịlụ ka na-adị na gị iPad. Nke a na nhọrọ na-mepụtara na-ehichapụ ehichapụ iPad data. Akwado faịlụ ndị iMessage, kọntaktị, na-akpọ ihe mere eme, FaceTime, kalenda, ncheta, ndetu, safari ibe edokọbara, foto, na videos.
Ihichapu All Data: a nhọrọ e mere maka ndị ọrụ mkpa ichicha iPad na-ere ma ọ bụ nye iPad pụọ. Faịlụ niile, gụnyere Apple ID, na-akpọ ihe mere eme, ngwa, email, kalenda, na-echetara, ndetu, na ndị ọzọ ga-ntukwasi-obi ehichapụkwa. Mgbe iji a nhọrọ na ntukwasi-obi ihichapu iPad, gị iPad ga-a ọhụrụ onye na-enweghị onye data na ya.
Olee otú Jiri Wondershare SafeEraser
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Wondershare SafeEraser na kọmputa gị. Wụnye na ẹkedori ya. Jikọọ gị iPad gị na kọmputa site na a dijitalụ USB. Mgbe ejikọrọ ịga nke ọma, ị pụrụ ịhụ gị iPad egosi na n'elu elu aka ekpe nke isi window.
Nzọụkwụ 2. Họrọ otu nke 4 nhọrọ mkpa ka ị ihichapu data on iPad. Mgbe wee soro ozugbo na usoro ihe omume ịrụcha nhichapụ.
Hichapụ iPhone Data-enweghị adịkwa Jailbreak
> Resource> ihichapu> Olee otú iji adịgide adịgide ihichapu Data on iPad